हस्त-मैथुन गर्दा स्वास्थ्य’मा असर गर्छ की गर्दैन ? थाहा पाउनुहोस् – Ramailo Sandesh
हस्त-मैथुन गर्दा स्वास्थ्य’मा असर गर्छ की गर्दैन ? थाहा पाउनुहोस्
ह’स्तमै’थुनका सम्बन्धमा समाजमा अनेक धारणा व्याप्त छ । कतिले यसलाई स’मस्या मानेका छन्, कतिले समधान ।एकथरीको तर्क छ, हस्त’मैथु’नको स्वा’स्थ्यमा कुनै हानी छैन । बरु, यसले यौ’न आवेग शान्त गर्छ । यौ’न कुण्ठा हटाउँछ । मनो’विकार हटाउँछ । अर्को फाइदा त के भने, हस्तमै’थुनले ब’लात्का’र जस्ता आ’पराधिक कृ’त्य कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । किनभने यसले क्षणिक रुपमा यौ’न उत्तेज’ना शान्त गर्छ ।
तर, किशोरवयमा पुगेपछि बढ्दो यौ’न चाहाना शान्त गर्न किशोर/किशोरीले यौ’नाङ्ग’मा स्पर्श गर्छन् । उनीहरुले यो कुरा खुलेर बाहिर भन्दैनन् । र, उनीहरुलाई लाग्छ, ‘कतै मैलें नराम्रो काम त गरिरहेका छैन ?’ यस्तै भावनाले उनीहरुमा हिनता’बोध पैदा हुनसक्छ ।विज्ञानले यसलाई गल’त भन्दैन । हस्त’मैथुनलाई स्वास्थ्य’का लागि राम्रो र सामान्य मानिन्छ ।
के हो हस्तमै’थुन ? यौ’नान्द लिनका लागि जब आफ्नो यौना’ङ्ग स्पर्श गरिन्छ, हस्त-मैथुन त्यही हो । हरेकले यो आ-आफ्नै ढंगले गर्छन् । हस्तमैथुनको क्रममा उनीहरु यौ’नजन्य दृश्य, वस्तु आदिको कल्पनामा डुब्छन् ।
के ह’स्तमैथुन गल्ती हो ?हस्त’मैथुन गल्ती होइन । यो आ’नन्द अनुभूत गर्ने प्राकृ’तिक तरिका हो । यसले स्वंम’लाई आनन्द दिला’उँछ । यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा पनि हो । सार्व’जनिक स्थानमा यस्तो काम गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ । हस्त’मैथुन युवा-युवती दुबैले गर्छन् । युवा’हरुमा १७ बर्षको उमेरपछि हस्त’मैथुनको इच्छा तिब्र हुन्छ ।
के यसले स्वा’स्थ्यमा हा’नी गर्छ ?
हस्त’मैथुनले स्वास्थ्य’मा कुनै हानी गर्दैन । हस्त’मैथुनले पाग’ल वा अ’न्धा बनाउँदैन । हस्त’मैथुन गर्दा आँखको तल कालो हुने वा शारीरिक विकास रोक्ने पनि गलत कुरा हुन् ।सत्य त के भने, यसले हाम्रो तनाव कम गर्छ । शरीरमा खुसी संचार गराउँछ । खुसी ल्याउने हर्मोन इन्डा’रफिन्स श्राव गराउँछ । यसले रिल्याक्स महसु’ष हुन्छ ।
साथै हस्त-मैथुनले सुत्नका लागि सहयोग गर्छ, निजी अंग-लाई सक्रिय राख्छ ।ह’स्तमैथुनले स्वा’स्थ्यमा हानी नपुर्‍याउने मात्र होइन, बरु यौन सम्पर्कभन्दा यो सुरक्षित र गोप्य पनि हुन्छ । यौ’न सम्प’र्कमा कतिपय खत’रा वा सम’स्या हुन्छ, जो ह’स्तमैथुनमा हुँदैन । यसले यौ’नजन्य रोग’हरु सर्ने भय पनि हुँदैन ।